March 13, 2018 – Page2– Burmese.asia
စိတ်တန်ခိုးစွမ်းအင်တွေရရှိဖို့ ဂူင်္သချိုင်းမှာ နှစ်ပေါင်း ၃၀ ကျော်ကြာနေထိုင်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသား
On March 13, 2018 By mmhtet
တောင်အာဖရိက၊ ဂါနာက အမျိုးသားတစ်ဦးဟာ ကိုယ်ပိုင်ထူးကဲစွမ်းရည်တွေ ရလာဖို့အတွက်ဆိုကာ င်္သချိုင်းလှိုဏ်ဂူအတွင်း နှစ်ပေါင်း ၃၀ ကျော်ကြာ နေထိုင်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အသက် ၄၀ နှစ်အရွယ်ရှိ အမျိုးသား ဖိလစ်မန်းဆက် ဆိုသူဟာ သူ့ရဲ့ ထူးခြားရဲ့ လူနေမှု ပုံစံအကြောင်းကို အခုလိုပဲ မျှဝေပေး လာခဲ့ပါတယ်။ဖိလစ်ဟာ ပျက်စီးဟောင်းနွမ်းနေပြီဖြစ်တဲ့ ဂူင်္သချိုင်း၊ လှိုဏ်ဂူတစ်ခုမှာ လူသေအလောင်းတွေနဲ့ နှစ် ပေါင်း ၃၀ ကျော်ကြာအတူနေ ထိုင်ခဲ့ပြီးတော့ သူဟာ ထူးကဲစွမ်းရည် တန်ခိုးတွေရလာဖို့ မျှော်လင့် ထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သူဟာ အန်နန်ဘိုစို ပတ်ဝန်းကျင်က ဝိဥာဉ် စိတ်စွမ်းအင် တန်ခိုးရဆရာ တစ်ဦးဆိုသူ တော့ဘီအဇက်လီရဲ့ အမိန့်နဲ့ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း သူ့ရဲ့နေရပ်ကို […]
သိပ္ပံသမားတွေ သေလောက်တဲ့ ရသေ့ကြီးဦးခန္ဓီရဲ့လုပ်ရပ်
အင်္ဂလိပ် အရေးပိုင်မင်းဟာ ရသေ့ကြီးဦးခန္ဓီကိုစစ်ဆေးဖို့ အတွက် သူ့ ရဲ့ ပုလိပ်အဖွဲ့ နဲ့ ရောက်ရှိလာခဲ့တယ် ပြီးတော့ ရသေ့ကြီးကိုမေးတယ် ။ တပည့်တော်တို့ က တာဝန်အရ လာရတာပါဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားဟာ ဝင်ငွေ မရှိပဲနဲ့ဘုရားတည်ကျောင်းဆောက် လုပ်နေတာတွေဟာ အများကြီးပဲဘယ်က ပိုက်ဆံတွေနဲ့ဆောက်နေတာပါလဲဘုရားတဲ့ ပြီးတော့ အခု တန်ဆောင်းဆောက်ဖို့ဂျာမဏီကိုမှာတဲ့ သံမဏိဒေါက်တိုင်ကြီးတွေကို ဝယ်ဖို့ ငွေဟာ ဘယ်ကနေများရပါသလဲဘုရားဆိုတော့ ရသေ့ကြီးက သိချင်ရင် ခဏစောင့်ဆိုပြီးဘုရားခန်းထဲဝင်ကာ ၄၅ မိနစ် ပုတီးစိပ်ပြီးပြန်ထွက်လာခဲ့တယ် သိပ်မကြာခင်မှာပဲ အရေးပိုင်မင်းရှေ့မှာတင်လူတွေဟာ ရောက်ရောက်လာပြီး နားကပ်လှုဆွဲကြိုးလှုလက်ကောက်လှုနဲ့[…]
မွေးဖွားပြီးသည်နှင့် တပြိုင်နက် ချက်ကြိုးဖြတ်ပြီး ရေထဲသို့ ၂ စက္ကန့်ခန့် မြုပ်လိုက်၊ နှစ်လိုက်ဖြင့် ၃ ကြိမ်ပြုလုပ်ကာ ကြီးပြင်းလာကြသည့် မြန်မာပြည်ထဲက ဆလုံကလေးငယ်များ
ဆလုံလူမျိုးအကြောင်း ဆလုံ လူမျိုး သည် မြိတ် ကျွန်းစု ၏ အဖိုး မဖြတ် နိုင်သော ပြယုဒ်တစ်ခု ဖြစ်ည်။ သူတို့ ၏ ဓလေ့ စရိုက်၊ ရိုးသား ဖြောင့်မတ်မှု ကိုတုနှိုင်းရန် အရာ မရှိပါ။ ထို့ကြောင့် ၎င်း လူမျိုးတို့မှာ လူသိများထင်ရှား နေခြင်း ဖြစ်သည်။ ဆလုံ လူမျိုးတို့သည် ပင်လယ် ပြင်တစ်ခွင် ၀မ်းစာ အတွက် လှည့်လည် ကျက်စား ကြသည်။ ရေကူး၊ရေငုပ်ရာ တွင် ကျွမ်းကျင် သည်။ ထို့ကြောင့် Sea Gypsy orMen of the Sea အဖြစ် အမည် တွင်ခြင်း […]
​လောဘ​ကြောင့်​စိတ်​​တွေတုန်​လှုပ်​​ခြောက်​ခြားခဲ့တယ်​… **************** 9.3.2018 ရက်​​​သောကြာ​နေက ​တောင်​ကြီး C B ဘဏ်​မှာ​ငွေသိန်းသုံးဆယ်​ထုတ်​ယူရပါတယ်​… ဘဏ်​ဝန်​ထမ်းက တစ်​​ထောင်​ကျပ်​တန်​ ဆယ်​အုပ်​တွဲသုံးအုပ်​​ပေးရမှာကိုမှားယွင်းပြီး ငါး​ထောင်​တန်​အုပ်​သုံးဆယ်​ထုတ်​​ပေးလိုက်​ပါတယ်​.. ဘဏ်​ဝန်​ထမ်းကိုယ်​တိုင်​ဘဲ ကြွပ်​ကြွပ်​အိတိထဲ ထည့်​ပြီး​ပေးတာ​ကြောင့်​ ကျ​တော်​လည်း ဆယ်​အုပ်​စီးသုံးထုတ်​ ကိုသာသတိထားမိလိုက်​ပါတယ်​ တစ်​​ထောင်​တန်​ ငါး​ထောင်​တန်​ ဆိုတာကိုမမြင်​​တွေ့လိုက်​ပါဘူး… ​ကျောက်​စိမ်းစက်​ရုံကို​ရောက်​​ပြီး ​ငွေစရင်းရှင်​လင်းကြ​တော့မှ ငါး​ထောင်​တန်​​တွေ ဖြစ်​​နေတာကိုသိလိုက်​ရပါတယ်​ယ ​ငွေ​တွေက အများကြီးဘဲ..ပို​နေတယ်​ ************************* ကျ​တော်​က လပွတ္တာမှာ အိမ်​ဌား​နေရတာပါ လပွတ္တာမှာ အိမ်​တစ်​လုံးကိုယ်​ပိုင်​ ရနိူင်​ဖို့ ​နေ့တိုင်းစိတ်​ကူးယဉ်​အိမ်​မက်​​နေတဲ့သူပါ အိမ်​ဌားဘဝနဲ့ လပွတ္တာမှာမ​နေချင်​ဘူး ​နောက်​ပြီး ​ကျောက်​စိမ်းဆီဖြန့်​ချီ​ရေးအတွကိအ​ရောင်းကားတစ်​စီးလည်း အလွန်​လိုအပိ​နေတာပါ ကျ​တော်​အရမ်း​တွေ​ဝေပြီး တုန်​လူပ်​​ခြောက်​ခြားလာပါတယ်​… ဘဏ်​က​နေ​ငွေအ​ပေးအယူ ကိစ္စလုပ်​ကြရင်​ ​ကောင်​တာက​နေထွက်​ခွာပြီးတာနဲ့…အရူတ်​အရှင်း အငြင်းအခုန်​ ပြုဖို့ရာ မလွယ်​ကူ​တော့ဘူဆိုတာကျ​တော်​သိထားပါတယ်​ ကျ​တော်​လိုချင်​တာရ​တော့မယ်​ဝယ်​နိူင်​မယ်​. တဖက်​က […]
သင် နေ့စဉ်တွေ့နေရပေမယ့် ဘယ်လိုအသုံးဝင်သလဲဆိုတာ မသိသေးတဲ့ အရာ ( ၁၀ ) မျိုး
၁။ ရှပ်အင်္ကျီနောက်မှာ ပါတဲ့ကွင်း သင် ရှပ်အင်္ကျီနောက်မှာ ပါတဲ့ကွင်းလေးကို မကြာခဏတွေ့ဖူးမှာပါ။ တချို့က ဘာအတွက်လဲဆိုတာကို သိချင်ကြမှာပါ။ တကယ်တော့ ထိုကွင်းလေးတွေမှာ ရည်ရွယ်ချက် ၃ ခုရှိပါတယ်။ ပထမတစ်ခုကတော့ရိုးရှင်းပါတယ်။ သင်အင်္ကျီကို အလွယ်တကူချိတ်ထားနိုင်ဖို့ပါ။ဒီနည်းဟာ ရိုးစင်းပီး သင့်အင်္ကျီကိုလည်း မသပ်မရပ်ဖြစ်စေလို့ အသုံးနည်းပါတယ်။ဒုတိယအချက်ကတော့ သင်နက်ကတိုင်ဝတ်ဆင်ဖို့ပြင်ဆင်ရာမှာ လွယ်ကူစေဖို့ပါ။ နောက်ဆုံးအချက်က တော့ ရိုဆန်ပါတယ်။အရင်တုန်းက အမေရိကန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေ သူ့ကောင်မလေးတွေနဲ့ပထမဆုံး ချိန်းတွေ့ချိန်မှာ ကောင်မလေးထံမှ အချစ်ကို အပြည့်အဝရရှိတဲ့သင်္ကတအနေနဲ့ ကွင်းလေးကိုဖြတ်လိုက်ကြပါတယ်။ ၂။ ferret bead သင့်လပ်တော့(ပ်) အားသွင်းကြိုးအစွန်နားက စလင်ဒါပုံစံ လေးကိုလည်းသင်သတိထားမိမှာပါ။ အလှအပအတွက်လို့ထင်ကောင်းထင်နိုင်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ferret bead လို့ခေါ်တဲ့ အရာလေးဟာ အီလက်ထရစ် ဆားကစ် တွေမှာ ဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့ ကြိမ်နှုန်းမြင့် […]
နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်တွင် မြန်မာနှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်ခြားစောင့်တပ်များ ပူးတွဲကင်းလှည့်
မြန်မာနယ်ခြားစောင့်တပ် နှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်ခြားစောင့်တပ် (BGB)နှင့် တို့သည် နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ် တွင် ပူးတွဲ ကင်းလှည့်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ အဆိုပါ နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့များသည့် မတ်လ ၁၁ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀ နာရီမှ မွန်းတည့် ၁၂ နာရီအထိ ဘန်ဒါဗန်ရှိ ဂမ်ဒမ်မှ ရခိုင်ပြည်နယ် တမ်ဘရူ အထိ ပူးတွဲကင်းလှည့်ခဲ့ကြောင်း BGB တပ်ရင်း ၃၄ ၏ တပ်ရင်းမှူး ဒုဗိုလ်မှူးကြီး မွန်ဇာရူ ဟက်ဆန် ခန်၏ ပြောကြားချက်ကို ကိုးကားပြီး Dhaka Tribune သတင်းကဆိုသည်။ ကင်းလှည့်ရာတွင် မြန်မာနယ်ခြားစောင့်တပ်မှ ၁၇ဦး နှင့် BGB မှ ၁၅ ဦးတို့သည် ဂမ်ဒမ် […]
ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ပါစေ၊ အချိ်န်မတန်ခင် သုက်လွှတ်ခြင်းဟာ စ်ိတ်ရှုပ်စရာကောင်းပါတယ်။ စိတ်လှုပ်ရှားနေခြင်းဟာ ဒီပြဿနာရဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အချိ်န်မတန်ခင် သုက်လွှတ်ခြင်းဟာ အမျိုးသားတွေမှာ လိင်ဆက်ဆံမှုရဲ့အစမှာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ လှုံ့ဆော်မှု အနည်းငယ် ရရှိရုံနဲ့ သုက်လွှတ်ခြင်းကို ဆိုလိုပါတယ်။အချိ်န်မတန်ခင် သုက်လွှတ်ခြင်းဟာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ မစွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်း တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာဝန်တွေက အမျိုးသားတွေရဲ့ ၂၀-၃၀% လောက်ဟာ အချိ်န်မတန်ခင် သုက်လွှတ်ခြင်းကို တစ်ချိန်မဟုတ် တစ်ချိန်မှာတော့ ကြုံတွေ့ရတတ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အချိ်န်မတန်ခင် သုက်လွှတ်ခြင်းရှိတဲ့ အမျိုးသားတွေဟာ ခံစားမှုပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများစွာကို ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးခြင်း၊ ကိုးရိုးကားရားဖြစ်ခြင်း၊ စိတ်မထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းတွေကို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ အချိ်န်မတန်ခင် သုက်လွှတ်ခြင်း အကြောင်းရင်းများ ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြောင်းရင်းများစွာ ရှိပါတယ်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ […]
Sex KnowledgeLeaveacomment
သင့်ကိုစားသွားနိုင်တဲ့ ကြောက်စရာ အသားစားပင် ( ၇ ) ပင်
များသောအားဖြင့်တော့ သစ်ပင်အကြောင်းပြောကြတဲအခါ ပန်းပွင့်တဲ့အပင် သာမန်သစ်ပင်တွေ ခြုံပုတ်တွေအကြောင်းပဲ တွေးမိကြမှာပါ ။ ဒါပေမယ့် ကမ္ဘာပေါ်က တချို့သောအပင်တွေကတော့ သူတို့အနားကို သက်ရှိတစ်ကောင်ရောက်လာတဲ့အခါမှာ သတ်ဖြတ်နိုင်စွမ်းရှိကြပါတယ် ။ အခု ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အပင် ၇ ပင်အကြောင်းပြောပြတော့မှာပါ ၁. Venus Flytrap အသားစားအပင်တွေအကြောင်းပြောရရင်တော့ အရင်ဆုံးတွေးမိတာက Venus Flytrap ပါပဲ… ဒီအပင်ကို တောင်နဲ့မြောက်ကာရိုလိုင်းနားမှာ တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး သားကောင်တွေကို သူ့တို့ အရွက်တွေ(ပါးစပ်)ထဲဝင်လာတဲ့အချိန်ကို စောင့်နေကြတဲ့အပင်မျိုးဖြစ်ပါတယ် ။ အရွက်တွေဟာ စေးကပ်ပြီးတော့ သွားလိုမျိုးအချွန်တွေပါရှိတယ် ။ ။အင်းဆက်တစ်ကောင်လာနားတဲ့အခါမှာ အပင်ရဲ့ပါးစပ်ဟာပိတ်သွားပြီး လူရဲ့အသားကိုတောင်ချေဖျက်နိုင်တဲ့ အစာချေအင်ဇိုင်းတွေထွက်ရှိလာပြီးတော့ သားကောင်ကို ချေဖျက်ပစ်လိုက်ပါတယ်လို့ အသားစားအပင်ပညာရှင် Barry Rice ကပြောကြားခဲ့ပါတယ် ။ ၂. […]
အမျိုးသမီး သုံးဦးသာ ဝတ်ခဲ့ရခဲ့သည့် မဟလ္လတာတန်ဆာ ဝတ်ရုံကြီး
၁။ စိန်အစစ်က (၄)ပြည် ၂။ ပုလဲတွေက (၁၁)ပြည် ၃။ မြနဲ့သန္တာတွေက (၂၂)ပြည် ၄။ နီလာနဲ့ ပတ္တမြားတွေက (၃၃)ပြည် အခြားရတနာတွေကလည်း မရေမတွက်နိုင်အောင်များတယ်။ချည်ကလဲ ရွှေချည်နဲ့ငွေချည်ပဲပါတယ်။ တန်ဆာကြီးရဲ့တန်ဖိုးဟာ (၉)ကုဋေအဖိုးထိုက်ပါတယ်။လက်ခအနေနဲ့ (၁)သိန်းပေးရတယ်။ ပန်းတိမ်သည်ပေါင်း (၅၀၀) လုပ်တာတောင်(၄)လကြာမှပြီးတယ်။ ဆင်မြန်းလိုက်လို့ အဝေးကမြင်ရရင် ဒေါင်း အစစ် ကနေသလိုပါပဲတဲ့။ လမ်းသွားရင်လဲ ရွှေခြူ ငွေဆွဲလှည်းတွေရဲ့ သံစုံသာယာတေးလေးတွေကလည်း ထွက်နေပါသေးတယ်။ မဟလ္လတာတန်ဆာကို ဝတ်ဆင်ရမည့်သူကလည်း အဲဒီဘဝမှာ ဆင်ပြောင်ကြီးငါးစီး အားမာန်ကြီးတဲ့ဘဝဖြစ်ရတယ်။ ဒါမှလည်းဝတ်နိုင်ပါတယ်။ ထင်ရှားတဲ့ရတနာတွေကိုပဲတွက်ရင် တင်းနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်ပြည်ပေါင်း (၇၀)ဆိုတော့ (၄)တင်းနဲ့(၆)ပြည် ရှိပါတယ်။ အခြားရတနာတွေက များလွန်းတဲ့အတွက် ရေတွက်လို့မရပါဘူး။ရွှေပိဿာချိန်ကလဲ (၁)ထောင်ဆိုတော့ လေးလံလွန်းတဲ့အတွက် သာမန်အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမဝတ်ရုံနိုင်ပါဘူး။ […]
မိန်းကလေးတွေ အိမ်ထောင်ပြုတော့မယ် ဆိုရင်
၁။ ကြီးတာကို ရှာပါ။ ၂။ အရှည်ကို ကြည့်ပါ။ ၃။ ဝင်ဆန့် မဆန့် သိပါ။ ၄။ တော်မတော် စမ်းသပ်ပါ။ ၅။ အနေတော်ကို ရွေးပါ။ မိန်းကလေးတွေ အိမ်ထောင်ပြုတော့မယ် ဆိုရင်… ၁။ ကြီးတာကို ရှာပါ ဆိုတာ ဥာဏ်ပညာ ကြီးတာကို ပြောတာပါ။ ဥာဏ်ပညာ ကြီးသူမှသာ အိမ်ထောင်ကို ဦးစီး ဦးဆောင် ပြုနိုင်မှာ မဟုတ်ပါလား ။ ၂။ အရှည်ကို ကြည့်ပါ ဆိုတာ ကိုယ့်ရဲ့ ဘဝလက်တွဲဖေါ် ဖြစ်မယ့်သူက ကိုယ်နဲ့ စိတ်ထားခြင်း ကိုက်ညီရဲ့လား၊ စိတ်ထားကောင်းရဲ့လား၊ ကိုယ့်အပေါ် ကောင်းရဲ့လား အကဲခတ် ကြည့်ပါလို့ ပြောတာပါ။ […]